इङ्ल्याण्ड क्रिकेट बोर्डले तत्काल देश छोड्न भनेपछि भावुक हुदै सन्दीपले भने : मेरो के गल्ति छ ? | TajaKhabarTV
इङ्ल्याण्ड क्रिकेट बोर्डले तत्काल देश छोड्न भनेपछि भावुक हुदै सन्दीपले भने : मेरो के गल्ति छ ?
२०७८, ६ श्रावण बुधबार १०:२७ July 21, 2021 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले भिसा समस्याका कारण अन्तिम समयमा ‘द हन्ड्रेड’ खेल्न नपाएपछि इंग्ल्यान्ड तथा वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् सन्दीपले प्रतियोगिता खेल्न नपाउनुको कारणबारे लेख्दै यसमा ईसीबीको भूमिका सन्तोषजनक नरहेको बताएका हुन्।
‘द हन्ड्रेडमा सहभागी हुन नपाउँदा निराश छु। मैले टियर ५ भिसाका लागि आवेदन दिँदा दुवै प्रतियोगिताका लागि एकै प्रायोजन प्रमाण पत्र पर्याप्त रहने बताइएको थियो। जुलाई १८ को दिन मेरो क्वारेन्टिन पूरा हुनुभन्दा २ दिनअघि मलाई ईसीबीबाट मेरो भिसा मान्य नभएको र सकेसम्म चाँडो देश छोड्न भनियो। मैले लगातार ईसीबी अधिकारीसँग यसबारे कारण सोधिरहेको छु र सही उत्तर पाइरहेको छैन। म बुझ्छु अवस्था बदलिन समय लाग्दैन, तर मेरो भिसा मान्य नहुनुको प्रष्ट कारण भने मैले पाउनुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्।
सन्दीपले यसअघि टी–२० ब्लास्टमा सहभागी हुन गरेको कागजी प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको भिसाबाट नै इंग्ल्यान्ड यात्रा गरेका थिए। उनले यस प्रतियोगितामा सहभागी हुन निकै मिहिनेत गरेको भन्दै ईसीबीलाई यस विषयमा हेरेर अन्यलाई यस्तो समस्या नपरोस् भन्ने कामना गरेका छन्।
‘सबै टोलीलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। मैले यहाँका समर्थकबाट सधैं माया पाएको छु र ईसीबीलाई यस विषयमा हेरेर अन्यलाई यस्तो समस्या नपरोस् भन्ने कामना गर्दछु। मेरो सहभागिताको प्रतीक्षा गरिरहनुभएका समर्थकको अवस्था मैले बुझेको छु। आशा गरौं आउने दिन राम्रो हुनेछ,’ उनले लेखेका छन्।
सन् २०२० मा पहिलोपटक प्रतियोगिता आयोजना हुने तय भए पनि कोरोना महामारीका कारण हुन सकेन। त्यसैले यसको पहिलो संस्करण २०२१ मा सारिएको थियो। सन्दीपलाई गत वर्ष ओभल इन्भिन्सिबल्सले ६० हजार पाउण्ड (झन्डै एक करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरमा अनुबन्ध गरेको थियो। यसपटक पनि ओभलले उनलाई रिटेन गरेको थियो।
बिहीबारबाट शुरु हुने प्रतियोगितामा ओभलसँगै ब्रिमिङहम फोएनिक्स, लण्डन स्प्रित, म्यानचेष्टर ओरिजिनल्स, नर्थन सुपरचार्ज्स, साउथर्न ब्रेभ, ट्रेनट रकेट्स र वेल्स फायरले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्। सन्दीप प्रतियोगिताबाट बाहिर हुने भएपछि उनको स्थानमा दक्षिण अफ्रिका स्पिनर तबरेज शाम्सी खेल्ने छन्। उनी टी २० वरीयता नम्बर वान बलर हुन्।
हेर्नुहोस् सन्दीपको फेसबुक स्टाटस
द हन्ड्रेडमा पर्न नसकेकोमा म निकै दुःखी छु । म त्यतिबेला मेरो टिम ओभल इन्भिन्सिबल्समा राम्रो खेल्न गइरहेको थिएँ र मैले ईसीबीका अधिकारीहरुले दिएको सबै निर्देशन पनि पालना गरिरहेको थिएँ
संक्षेपमा भन्नुपर्दा मैले टायर फाइभ भिसाको लागि आवेदन दिँदा मलाई एउटा सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप (सीओएस) को भाइटालटी ब्लास्ट र द हन्ड्रेडका लागि पर्याप्त हुने बताइएको थियो । कोरोना महामारीको कारण भिसा आउनमा ढिलाइ भयो र वोस्टरसायरले बाहिर निकाल्यो । तर, उसले पुनः मेरा अफिसियलहरुमार्फत मलाई सम्पर्क गर्‍यो र जुलाई १० मा म बेलायत आइपुग्न सके हुने बतायो । त्यसका लागि मलाई पनि कुनै समस्या थिएन किनकी मेरो सीओएस अझै सकिएको हुन्नथ्यो ।
म जुलाई ९ मा बेलायत आउँदासम्म कुनै समस्या थिएन । त्यसपछि मलाई सरकारी क्वारेन्टिन केन्द्रमा पठाइयो । जुलाई १८ मा मेरो क्वारेन्टिन अवधि सकिनुभन्दा दुई दिनअघि ईसीबीले मेरो भिसा सकिएको र जतिसक्दो छिटो मैले मुलुक छाड्नुपर्ने बतायो । मैले के गल्ती भएको छ भनेर सोधेँ तर मलाई ईसीबीका कसैले पनि स्पष्ट जवाफ दिएनन् । मलाई थाहा थियो कि विवाद बढ्दै गए त्यसले ठूलो रुप लिन सक्थ्यो । तर कम्तीमा मेरो वैध भिसा जुनसुकै स्थानमा किन वैध हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर जान्ने हक मलाई थियो ।
मैले यो प्रतियोगिता खेल्नको लागि धेरै कुराहरु गुमाएको थिएँ र मैले त्यहाँका सबै टोलीको लागि राम्रो होस् भन्ने प्रार्थना र चाहना राखेको थिएँ । मैले सधैं बेलायतका मानिसहरुबाट माया पाउँदै आएको छु र म ईसीबीलाई यो विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु ताकि अरु कसैले यस्तो झेल्नु नपरोस् । मलाई यो प्रतियोगिता खेलेको हेर्न चाहने मानिसहरुका लागि कस्तो लाग्यो होला भन्ने पनि म महसुस गर्न सक्छु । (आशा गरौं) आगामी दिन सुखद् हुनेछन्